FBA Kutumira FCL, LCL - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
FBA FCL & LCL kuenda kuUS
Tine kana pasvondo kuendesa zvakananga kuLos Angeles, USA, kukwegura nekukurumidza, mutengo wakaderera. Tinogona kupa zvakapetwa kaviri pasuru mutero kune musuo sevhisi.
Kambani yedu inopa hunyanzvi musuwo - kuenda - musuwo nzira dzekufambisa dzekupfeka, fenicha, mwenje, zvigadzirwa zvemagetsi, mabhegi, shangu, ngowani, zvikamu zvemotokari nemamwe maindasitiri.
1. MuDongguan, Shenzhen nedzimwe nzvimbo dzine yavo yekuparadzira nhumbi nzvimbo, rimwe zuva kunotora zvinhu.
2. Chengetedza kubatana pamwe nemakambani mazhinji ekutakura, kupa masevhisi epasirese kutumira mabasa, nekukurumidza kupa nzvimbo yakakwana yekutumira.
3.Nevevashandi vezvetsika netsika, uye tsika dzine hukama hwepedyo hwakanaka, kuona mhinduro nekukurumidza kumatambudziko etsika.
4. Kutumira kuUnited States mazuva gumi nemana kuchiteshi, mazuva makumi maviri kumusuwo, mukuru weAmerica akajeka sevhisi
5. Kuchengetedza kuti vatengi vanogamuchira zvinhu nenguva, izvo zvinhu kuLA zvakanangana nekwairi kuenda rori.
1.Tora booking booking, hombe cargo warehousing, kudhinda magwaro, kuchengetera nekurongedza, kuzivisa tsika uye mumiriri wekuongorora uye imwe yekuAmerican kutumira LCL imwe-yekumira sevhisi, kuti iwe uchengetedze dambudziko.
2. Iwe unongoda kupa izvo zvinhu, iyo yekurongedza runyorwa (kusanganisira zita, vhoriyamu, huremu uye kukosha kwezvinhu) uye proforma invoice. Tichakutarisira kune zvese zvimwe iwe.
3. Chitupa cheDOT chenyika chakapihwa neDhipatimendi Rekufambisa reU.S., ine network yakakwana yekuparadzira marori muUnited States, kuperekedza rwendo rwako rwese.
4.Kushandira-kwenguva refu neGerman Allianz inishuwarenzi, kukurumidza kudhiraimendi, kubvunza kudetemba, kubvuma, muripo uye mamwe maitiro anogona kupedzwa mukati memazuva manomwe.
5. Ine ruzivo rwekutevera ruzivo, chero nguva yekuti iwe umhan'are ruzivo rwezvinhu, kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvako zvinosvika nenguva uye zvakachengeteka.
Kubatsira kweShipment Service
-Security zvakanakira: Iyo yose nzira yekutevera, munhu akazvipira anoona nezvekuona kuchengetedzeka uye kwakaringana kuendeswa kwezvinhu; Kurasikirwa kwezvinhu, kukuvara kwezvinhu zvinokurumidza kuita zvirevo.